Admin – Page5– BSI Learning Academy
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၁၀)
IELTS Reading Test အကြောင်းကို အပိုင်း (၉) မှာ ဖော်ပြပြီးနောက် အခု အပိုင်း (၁၀) မှာတော့ IELTS Writing Test နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Writing Test မှာ Writing Task (၂)ခု ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Writing Task (1) အတွက် ဖြေဆိုချိန် မိနစ် (၂၀)ရပြီး Writing Task (2) အတွက် ဖြေဆိုချိန် မိနစ် (၄၀)ရပါတယ်။ Academic Module Writing Task (1) မှာ diagrams, maps, building plans, bar charts,…
Admin June 6, 2018 June 6, 2018 IELTS IELTS, IELTS Writing 0
Planning to take an IELTS test?
We provide individual, intensive and group coaching sessions to help you hit your targeted score. You get to choose to study at the time of your convenience and at your own pace. For further information, reach us at 09254278273. #BSI #SupportingDreams IELTS (4 Skills) Timetable: 1:00 to 3:00 pm…
Admin May 6, 2018 August 23, 2018 IELTS IELTS classes, IELTS individual coaching, IELTS intensive 0
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၉)
IELTS Listening Test အကြောင်းကို အပိုင်း(၈) မှာ ဖော်ပြပြီးနောက် အခု အပိုင်း (၉) မှာတော့ IELTS Reading Test နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Reading Test မှာ Reading Passage (၃)ခု ပေးထားပါတယ်။ စုစုပေါင်းဖြေဆိုချိန် (၁)နာရီ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Reading Passage တစ်ခုစီကို မိနစ် (၂၀)အတွင်း ပြီးစီးအောင် အဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Listening Test မှာလို Answer Transfer လုပ်ဖို့ (၁၀)မိနစ် ထပ်မပေးတဲ့အတွက် မိမိအဖြေများကို အဖြေလွှာမှာ တစ်ခါတည်းရေးထားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ IELTS Reading Test…
Admin May 4, 2018 May 4, 2018 IELTS IELTS, IELTS reading 0
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၈)
IELTS Speaking Test အကြောင်းကို “IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၅)၊ အပိုင်း (၆)နှင့် အပိုင်း(၇)” မှာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပိုင်း (၈) မှာတော့ IELTS Listening Test နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Listening Test မေးခွန်းလွှာသည် IELTS (Academic) အတွက်ကော IELTS (General Training) အတွက်ပါ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Listening Test က နားထောင်ချိန် (၃၀) မိနစ် ကြာနိုင်ပါတယ်။ နားထောင်စဉ်မှာ အဖြေတွေကို မေးခွန်းစာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနားထောင်ပြီးတော့မှ မေးခွန်းစာရွက်ပေါ်မှာ…
Admin May 4, 2018 May 4, 2018 IELTS IELTS, IELTS listening 0
IELTS စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာမှာ အပိုင်း(၄)ပိုင်း ပါရှိကြောင်း၊ အဲဒါတွေကတော့ Listening, Reading, Writing and Speaking တို့ဖြစ်ကြောင်း “IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၁)” မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအပိုင်း (၅)မှာတော့ Speaking Part (1) အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Speaking Test မှာ အပိုင်း (၃)ပိုင်းရှိပါတယ်။ Speaking Part (1) က (၄) မိနစ်မှ (၅)မိနစ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Examiner က မိမိနှင့် မိတ်ဆက်ပါမယ်။ ထို့နောက် မိမိ၏ identification ကို စစ်ပါတယ်။ (IELTS…
Admin May 4, 2018 June 27, 2018 IELTS IELTS, IELTS speaking part 1 0
IELTS Speaking Part (3) Discussion Topics
IELTS Speaking Part (3) Discussion Topics Question Set (1) Development in Education How has education changed in your country in the last 10 years? What changes do you foresee in the next 50 years? A National Education System How do the expectations of today’s school leavers compare with those of…
Admin April 16, 2018 July 27, 2018 IELTS IELTS, IELTS Speaking Part30
IELTS Speaking Part (2) Questions
Describeateacher who has influenced you in your education. You should say: Where you met them What subject they taught What was special about them And explain why this person influenced you so much. Describeafilm or TV programme which has madeastrong impression on you.…
Admin April 16, 2018 May 4, 2018 IELTS IELTS, Speaking 0
IELTS Speaking Part (1) Questions
Family Do you havealarge family orasmall family? Can you tell me something about them? How much time do you manage to spend with members of your family? What sorts of things do you like to do together? Did/ Do you get on well with your family?…
Admin April 14, 2018 May 4, 2018 IELTS IELTS, Speaking 0